Filtrer les éléments par date : samedi, 26 septembre 2020
samedi, 26 septembre 2020 20:32
Efa roa taona nisesy tsy namonjy ny fivoriana eo anivon'ny firenena mikambana ny Filoha
Fotoan-dehibe hiaonan'ny Filoham-pirenena maneran-tany ny fivoriana eo anivon'ny firenena mikambana, fanao ny volana septambra, fotoana iray ihany koa io andraisam-pitenenana mahakasika ireo laha-dinika, toa ny nosy malagasy, ny CVO fanefitra sy fanafodin'ny Covid-19, ny CVO+ gélule, ny fijerintsika ny raharaha iraisam-pirenena...
Efa ho roa taona misesy anefa dia tsy nandeha tamin'izany fihaonam-be iraisam-pirenena izany ny Filoha Andry Rajoelina, fa ny minisitry ny raharaham-bahiny no misolotena azy any ankehitriny.
Tsaroana izy niady mafy hiakatra Tribune nandritra ny Tetezamita, nefa nahazo teny maharary hoe "Sans qualité" sy mpanongam-panjakana, nefa izao izy lanim-bahoaka ara-dalàna "avec qualité" indray no tsy miatrika.
'Ndeha atao hoe sahirana amin'ny fampandrosoana ny Malagasy eny ifotony izy, ka ny eto an-toerana no anaovana ezaka.
Tafandria mandry e.
samedi, 26 septembre 2020 19:43
Faritra Atsinanana: Laharam-pahamehana ny fanosehana ny tontolo ambanivohitra
Taorian'ny fitsidihana in-telo miantoana ny Distrikan'i Toamasina2, dia manatanteraka ny andiany faharoa amin'ny fitsidihana ny Distrikan'i Brickaville, Vatomandry, Mahanoro ny Governora RAFIDISON Richard Théodore sy ny ekipany. Alohan'ny hitsidihana ny Distrikan'i Marolambo sy Antanambao Manampontsy amin'ny volana Novambra.
Anatin'ny Programan'ity fitsidihana Ity:
samedi, 26 septembre 2020 10:26
Fampianarana: Miverina mianatra ny mpianatra ho mpitsabo
Namoaka naoty ny sojaben'ny fampianarana ambony momba ny fitsaboana, faculté de médicine, Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, fa miverina mianatra ny mpianatry ny faculté de médecine Antananarivo ny alatsinainy 5 oktobra 2020, ho an'ny 2eme année ka hatramin'ny 6 ème année.